DAAWO:-Qaad Farabadan Oo Lagu Gubay Muqdisho | Wardoon
Home Somali News DAAWO:-Qaad Farabadan Oo Lagu Gubay Muqdisho
DAAWO:-Qaad Farabadan Oo Lagu Gubay Muqdisho
Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa soo bandhigay Maanta Jawaanno khaad ah oo ay kusoo qabteen howlgallo ay Ciidanku ka sameeyeen Gobolka Banaaadir, waxaana gacanta lagu soo dhigay in ka badan 250 jawaan.
Ciidanka Booliska oo howlgallo sameeyay ayaa Saldhig Galbeed Degmada Dharkenley ee Gobalka Banaadir ku gubay Khaadka, waxaana sidoo kale ay Ciidanku gacanta kusoo dhigeen 6 gaari iyo 5 Doomood , kuwaasi oo lagu soo daabulay Jaadkaan oo ah mid aad u tira badan.
Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Duudishe oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in in Ciidanka Boolisku ay howlgaladaan sameeyeen waqtiyo kala duwan.
Ganacsatada Soomaaliyeed ayuu digiin u diray Afhayeenka Booiska Soomaaliyeed, waaxaana uu ugu baaqay in khaadka dalka sida sharcidarrada ah lagu soo galinayo ay tallaabo ka qaafdi doonaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa Xayiraad saartay Jaadka ka imaan jiray dalka Kenya, waxaana horay goobo fagaare ah lagu gubay tiro Jawaanno Jaad ah oo Ciidanka Boolisku ay gacanta kusoo dhigeen.
Previous articleGudoomiye Mursal iyo Farmaajo oo kala booday
Next articleTPLF oo looqabtay in 72 saacadood isku soo dhiibaan
Cabdikariin Guuleed shaki kuma jiro in alshabaab loo fududeeyay weerarkii SYL
DAAWO:-“5-tii gudoomiye kuxigeen ee Wadajir ee beesha Xawaadle laamiga ayaa lagu...